को भित्री - सबैभन्दा जटिल तस्बिरहरू को एक, सिर्जना जो को प्रयास, समय र पैसा धेरै खर्च भएको छ। केही मानिसहरू व्यवसायीक को सेवाहरू प्रयोग गर्न रुचि र कसैले आफूलाई एक विशेषज्ञ ठान्नुहुन्छ र यसलाई आफूलाई गरिरहेको। को भित्री धेरै फरक प्रविधी र विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक सादगी र minimalism रुचि र अरूलाई सबै सुन गहने फ्रेम खोज्छन्। इस्पात र सुन बाट कागज र polyethylene गर्न - पनि काम धेरै लागि सामाग्री। एक भन्दा, सायद, सुविधाजनक को - फोम। के यो आफ्नो हातले फोम बाहिर शिल्प बनाउन ले?
पहिलो, होईन सबै फोम काम को लागि उपयुक्त छ कि मनमा गरौं। सामान्य, पैकिंग, कुनै विशेष चासो, यो उपचार योग्य छैन देखि। होइन, यो अवश्य, डिजाइन मा प्रयोग गरिन्छ गर्न सकिँदैन, तर तपाईं फोम को कुनै पनि जटिल तथ्याङ्कले बनाउन आवश्यक छ भने, त्यसपछि यो विकल्प एकैचोटि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। भौतिक एक तंग आवश्यक हुनेछ, प्राथमिकताको भज-4, वा पीवीसी। उहाँले मुद्दा मा सबै भन्दा राम्रो आकार राख्छ र बिखर छैन।
कटिङ-आयामी वस्तुहरु - एक आसान काम र सधैं तुरुन्तै समाधान गर्न बाहिर बारी। पहिले तपाईं स्पष्ट परिणाम बाहिर आउन र अनुपात निर्धारण गर्नुपर्छ के कल्पना गर्न आवश्यक छ। सजिलो विकल्प - एक पेन्सिल स्केच, को छाया र मात्रा चित्रण गर्ने बनाउन। सरल सपाट तथ्याङ्कले वा अक्षरका वैकल्पिक छ, तर लक्ष्य भने - आफ्नो हातले प्लास्टिक फोम को प्रमुख शिल्प बनाउन, यो बाहिर जाने पर्छ के कल्पना गर्न राम्रो सुरुमा छ।
व्यापार को उपकरण
फोम कुँद्ने लागि उपकरण फोटो गर्नुपर्ने भागहरु को आकार फरक। सबैभन्दा गम्भीर कटौती लागि एक देख्यो वा पहेली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लागि मध्यम आकारको - सामान्य पहेली। सानो भागहरु लागि संकीर्ण धारिलो चक्कु वा स्केलपेल प्रयोग। मालिकको पनि विशेष नलिका संग टांका फलाम प्रयोग गर्नुहोस्।
फोम - धेरै नरम सामाग्री, यो प्रयोग, तपाईं अनुमति दिन्छ उपकरण को एक सेट वस्तुतः कुनै पनि आकार सिर्जना गर्न, विभिन्न आकारहरू को। यो कार्य खपत समय हुन सक्छ, तर यो अझै पनि उही काठ उत्पादन भन्दा छिटो छ। सतह गोंद corroding बिना वस्तुतः कुनै पनि प्रयोग फोम ब्लक गोंद सक्नुहुन्छ ठूलो वस्तुहरू सिर्जना गर्न। फारम बाहिर चिल्लो, तपाईं स्यान्डपेपर ठीक गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो हातले फोम बाहिर शिल्प बनाउन - यो एक समाप्त भित्री तत्त्व सिर्जना गर्न आवश्यक छ भनेर सबै छैन। उनको शरीर खत्म पछि वार्निश ढाकिएको र राम्रो रंग गर्नुपर्छ। चेतावनी! केही पेंट्स सुन्दर बहु-रंग जेली यसलाई गर्नाले, फोम corrode। कभर छनौट गर्दा पहिले तपाईंको सामाग्री को एक सानो टुक्रा मा प्रयास गर्नुहोस्। पनि चमत्कार फोम, एल्यूमीनियम वा कांस्य संग लेपित हुन सक्छ PVA गोंद को एक समाधान संग preimpregnated। को फोम को बहुमुखी तपाईं पूर्णतया रचनात्मक कल्पना खुलासा गर्न अनुमति दिन्छ।
फोम को गरे लेख आफ्नो हातमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले पूर्ण र पूर्ण छवि बनाउन मद्दत, को भित्री ठाउँ ठूलो साथै हुनेछ।
मूल, स्वादिष्ट, सुन्दर कुनै पनि अवसरको लागि उपहार - मिठाई रूख देखि
"ट्राफिक लाइट" Hack। आफ्नो हात विषयगत खेल र गतिविधिहरु लागि विशेषताहरु के
दुई सुई मा बुनाई मोजा - काम रचनात्मकता आवश्यक
Sledkov दुई सुई - सुझावहरू सुई महिलाहरु साईट
एक रोचक र मिसिन कूल सीना सिलाई बच्चाहरु को लागि सुरक्षित - बालिका लागि ठूलो उपहार
घरमा sinusitis लोक उपचार कसरी व्यवहार गर्न
त्यो downers बताउन: के सर्प सपना
स्कूल कब्जाको (Beslan): घटनाक्रम को क्रनिकल
यी विभिन्न प्रतिक्रियाहरू: "Estelle" रंग
Mortally घायल जंगी जहाज "Marat" Leningrad बचाव
पुस्तक को रूप मा केक: सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु, रोचक विचार र सिफारिसहरू
आफ्नै हातले विवाह लागि चश्मा सजाय